गुडविल फाइनान्स लिमिटेडले चालु आवमा ३ करोड १४ लाख ७२ हजार खुद नाफा कमायो | News Nepal
गुडविल फाइनान्स लिमिटेडले चालु आवमा ३ करोड १४ लाख ७२ हजार खुद नाफा कमायो
वैशाख २०, काठमाडौं गुडविल फाइनान्स लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनामा गत वर्षभन्दा १६ प्रतिशत बढी रू. ३ करोड १४ लाख ७२ हजार खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको यसै अवधिमा रू. २ करोड ७० लाख ९६ हजार थियो । यस वर्ष कम्पनीले रू। २ करोड ३ लाख ३४ हजार खराब कर्जा उठाएकाले खुद नाफा बढ्न सहयोग मिलेको हो ।
यस वर्ष गत वर्षभन्दा सञ्चालन नाफा भने घटेको छ । गत वर्षको ९ महीनामा रू। ४ करोड ९ लाख १० हजार सञ्चालन मुनाफा गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ३ करोड ६१ लाख ६७ हजार मात्र सञ्चान मुनाफा गरेको हो । हाल कम्पनीको रू.८० करोड चुक्तापूँजी रहेको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष जगेडा कोष रकम ११ प्रतिशत वृद्धि भई रू. १५ करोड ६१ लाख पुगेको छ ।
कम्पनीले यो ९ महीनामा गत वर्षभन्दा करीब ३५ प्रतिशत बढी रू. ६ अर्ब ९१ करोड ४० लाख ४३ हजार निक्षेप संकलन गरेको छ भने ३१ प्रतिशत बढी रू. ५ अर्ब ७० करोड ४७ लाख ७७ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । कम्पनीले निष्क्रिय कर्जा १ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी ५ रूपैयाँ २५ पैसा छ ।
प्रकाशित मिति : 2019-05-05
जुम्लामा बिजुली ‘युनिट कै सय’
जुम्ला । सरकारले बिजुलीमा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको बताएको छ । ऊर्जा मन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान...
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको असमान तलबमान, कस्को कति हेर्नुहोस्
काठमाडाैं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) को तलबभत्ता कति फरक होला ? पत्यार नलाग्न सक्छ, दुवैको...
सेञ्चुरी बैंकमा न्याैपाने डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले सञ्चालक समितिको बैठकले नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मनोज न्याैपानेलाई नियुक्त गरेको छ । हिमालयन बैंक,...
एनआइसी एसिया बैंकको नाफा १२९ प्रतिशतले बढ्यो, ३०५ करोड नाफा
काठमाडाैं । एनआइसी एसिया बैंकले गत आर्थिक बर्ष ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। १२९ प्रतिशतले...
श्री एयरले पायो अन्तराष्ट्रिय उडान अनुमति !
काठमाडौं । निजी वायुसेवा कम्पनी श्री एयरलायन्सले अन्तराष्ट्रिय उडान अनुमति पाएको छ । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्त‍्रालयले श्री एयरलाई विभिन्न...
यी हुन नक्कली नोटका कारोबारी, प्रहरीले नोट छाप्ने मेसिनसहित ७ जनालाई गर्‍यो सार्वजनिक
कैलाली । नक्कली नोट र नोट छाप्ने मेसिनसहित पक्राउ परेका ७ जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । धनगढी र काठमाडाैंबाट...
प्रतितोला सुनको मूल्य पुग्यो ७० हजार !
काठमाडाैं । सुनको मूल्य आज बढेर ७० हजार पुगेको छ । दैनिक सुनको भाउ बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो...
अपि पावरले माग्यो झण्डै २ अर्ब २७ लाखको हकप्रद निष्काशन अनुमति
काठमाडाैं । अपि पावर कम्पनीले १ः२ को अनुपातमा २ सय प्रतिशत हकप्रद स्वीकृतिका लागि माग गर्दै विद्युत नियम आयोगमा आवेदन...